Marooko (Af-Carabi المغرب, al-Maġrib, ama Boqortooyada Marooko waa dal dhaca woqooyiga iyo galbeedka Afrika. Marooko waa dal carbed, oo badkiisu dhan yahay 710.850 km², haddii lagu daro lamadegaanka Galbeed. shacabka ku nool waxay gaarayaan 31,993,00 qof.
Marooko waxey soohdin la wadaagtaa dalalka Al jeeriya,dhinaca galbeed waxaa ka xigta Badweynta Atlaantik, iyo saxaraha Galbeed oo ah gobol gooni ugoosad ah isla markaana leh maamul u gaara.
Morocco / (mawduucyada dhegaysta): Carabi: Makhriga, turjumaadda al-maokrib, lit. 'meel qorraxda ku dhejiya; galbeedka'; luqadaha Berbera: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, translit Lmeɣrib), si rasmi ah Boqortooyada Morocco (Arabic: المملكة المغربية, turjubaan al-Mamlakah al-Maghribiyah, lit. 'Boqortooyada Reer Galbeedka'; luqadaha Berber: ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, translation, Tageldit n Lmaɣrib), waa gobol madax bannaan oo ku yaal Waqooyi-galbeed Afrika. Waa mid ka mid ah guryaha dadka ajaanibka ah ee Berbers ah oo asaliga ah. Juquraafi ahaan, Morocco waxaa lagu gartaa gudaha gudaha xaafadaha dhaadheer, khariidado waaweyn oo lamadegaan ah iyo xeebta fog ee xeebta Atlantic iyo badda Mediterranean.
Waddnamha degaan Morocco[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Buuraleyda Rif waxay ku fidsan yihiin gobollada Mediterranean ee waqooyi-galbeed ee waqooyi-bari. Buuraleyda Atlas waxay hoos u dhisteen laf-dhabarka dalka, laga bilaabo waqooyi-bari ilaa koonfur galbeed. Inta badan qaybta koonfureed ee dalka ayaa ku taala xeebta Sahara, sidaas darteed guud ahaan si aan caadi aheyn oo aan dhaqaaleynin. Inta badan dadku waxay ku nool yihiin waqooyiga buuraha, halka dhinaca koonfureedna ku yaala Galbeedka Sahara, oo ah qabiil hore oo Isbaanish ah oo uu ku biiray Morocco sanadkii 1975-kii (fiiri Green March) Morocco waxa ay sheeganeysaa in Galbeedka Galbeedku qayb ka tahay dhulkeeda waxayna tilmaamayaan in ay yihiin Gobollada Koonfureed.
Magaalada caasimadda Morocco waa Rabat; magaaladeeda ugu weyn waa dekedda ugu weyn, Casablanca. Magaalooyinka kale ee lagu diiwaangeliyay dad ka badan 500,000 oo ka mid ah tirakoobkii Moroccan ee 2014 ayaa ah Fes, Marrakesh, Meknes, Salé iyo Tangier.
A Trip Through Morocco’s Rif Mountains
Fez​—Where Past Meets Present
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Marooko&oldid=235375"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 May 2022, marka ee eheed 03:43.